Icallọ ọrụ na-emepụta ihe nkiri - China na-emepụta ndị na-emepụta ihe na ndị na-eweta ya
Structure nke igwe anaghị agba nchara tapered abụọ yinye ala: dị ka ịnya ụgbọ ala mode, ọ nwere ike kere n'ime ike ala akara na-abụghị ike ala akara, dị ka okirikiri nhọrọ ukwuu, ọ nwere ike kere n'ime kwụ erute ala akara, chọrọ erute ala akara na mbịne ala akara. Enwekwara ike ịhazi ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị iji mezuo ụdị ndị ahịa niile. N'ime obosara nke ọkọlọtọ nlele ala bụ 100-2000mm, wdg.
Nhazi nke Cots Enwere ike kee ya n'ime akwa a na-eji ede akwụkwọ, akwụkwọ ndozi, akwa akwụkwọ, osikapa husking akwa, akwa metallurgical na akwa akwa mmanụ; Dị ka elu morphology, ọ nwere ike kere n'ime ewepụghị ala na patterned roba ala; Dabere na ihe enwere ike kee n'ime: butyl cots, akwa nitrile, akwa polyurethane na akwa silicone roba. A na-ejikarị akpati mejupụtara akwa roba dị larịị, akwa roba siri ike, isi igwe, olu mpịakọta na ikuku ikuku. Ya nhazi inc ...
Nhọrọ nke igwe anaghị agba nchara cone 1. Nhọrọ ogologo ala: Maka ngwongwo na obosara dịgasị iche iche, a ga-ahọrọ igwe na-eji obosara kwesịrị ekwesị. N'ozuzu, "na-ezute + 50mm" nakweere. 2. Nhọrọ nke mgbidi ọkpụrụkpụ na aro dayameta nke ala: Dị ka ịdị arọ nke ihe na-ebugharị na-ekesa na ndị na-akpọtụrụ kọntaktị, gbakọọ ihe achọrọ nke onye ọ bụla na-agbanye, iji chọpụta mgbidi mgbidi na dayameta nke ala. 3. Ala ihe a ...